အရေးပါဆုံး အချက်ကတော့ စင်ကာပူဆေးကုသမှုဟာအခြားနိုင်ငံထက် စာလျှင် စရိတ်စကနည်းနည်းများ
နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အကယ်၍သင့်မှာသာ ဆေးကုသဖို့ကျန်းမာရေးအာမခံရှိခဲ့တယ်ဆိုလျှင် သင်ဒါကို စိတ်ပူနေ စရာမလိုပါဘူး။
အောက်ပါ ကုသမှု အများစုဟာ အာမခံကုမ္ပဏီမှ သင့်အစားအကုန်ကျခံပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁. အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်း မှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်း
၃. ပြင်ပလူနာ အထူးကုများနှင့်ပြသခြင်း
၄. အမျိုးသမီး သားမြတ်(ရင်သား) ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း
၅. ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးခြင်း
၆. လူကြီးရောဂါများ ( အတွင်းတိမ်၊ အပြင်တိမ်၊ ခါးရိုး အစားထိုးခြင်း)
သို့သော်လည်း အချို့ရောဂါများသည် အာမခံ မယူမှီ အရင်ကတည်းကရှိနေပါက အာမခံ ကုမ္ပဏီမှ ကျခံလေ့ မရှိပါ။ အကယ်၍သင်ဟာ ငယ်ရွယ်ပြီး ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့လူဖြစ်ပါက၊ သို့မဟုတ် သင့်ရဲ့ ရင်သွေးငယ်တွေကို ရှောင်ကျဉ်လို့မရနိုင်တဲ့ မျိုးရိုးစင်ဆက် ရောဂါ တွေက ကာကွယ် ထားလိုတယ် ဆိုပါက၊ ယခုအချိန်သည် အာမခံ ဝယ်ရန် အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေ အာမခံဝယ်ယူရခြင်း အကြောင်းအရင်း အောက်ဖော်ပြပါ အချက် သုံးချက်ဟာ အားလုံးအတွက် အာမခံကို ရွေးချယ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
၁. ဆေးကုသစရိတ်ရှင်းလင်းရာမှာ ကြီးမြင့်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်များကြောင့် အံအားသင့်စရာမလိုခြင်း၊၊
ဆေးမကုသခင် စရိတ်စက သေချာတွက်ချက်ထားတာတောင်မှ တခါတလေ မမျှော်လင့်ဘဲ ကုန်ကျစရ်ိတ် ကြီးမြင့်သွားတာတွေရှိ တတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည် တော်တော်များများဟာ စင်ကာပူ ကို ဆေးကုသဖို့မလာခင် အာမခံအရင် ဝယ်ထားလေ့ရှိပြီး သူတို့ရဲ့မိသားစုနှင့်သားသမီးတွေကို ငွေကြေးဒုက္ခရောက်ခြင်းမှ ကြိုတင် ကာကွယ်ထားလေ့ရှိပါတယ်။
• အာမခံဟာ အကုန်အကျများပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရောဂါကြီးတွေကို ကုသဖို့ကုန်ကျစရိတ်ထက်တော့နည်းပါတယ်။
• အာမခံထားထားတဲ့ အတွက် ဆေးကုသအပြီးမှာ ငွေကြေးမတတ်နိုင်တဲ့အတွက် အံအားသင့်စရာတွေ မရှိတော့ပါဘူး။
• ငွေကြေးကို ပူပင်စရာမလိုတော့တဲ့အတွက် အခြားအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကို အာရုံစိုက်လို့ရပါတယ်။
၂. အာမခံ မထားခင်ရောဂါရှိနေပါကလည်း အာမခံထား၍ရခြင်း။
ဆေးကုသစရိတ်ရှင်းလင်းရာမှာ ကြီးမြင့်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်များကြောင့် အံအားသင့်စရာမလိုခြင်း
ခေတ်မှီတဲ့ လူငယ်တော်တော်များများဟာ သူတို့မှာမျိုးရိုးလု်ိက်တဲ့ရောဂါရှိတယ် ဆိုတာသိကြပါတယ်၊၊ (ဥပမာ ရင်သားကင်ဆာ၊နှလုံးရောဂါ၊ဆီးချို) သူတို့လည်းတချိန်ကြရင် ဒီရောဂါတွေခံစားရမှာပဲ ဆိုတဲ့အသိနှင့် ငွေကုန်ကြေးကျ မများအောင် ကျန်းမာရေး အာမခံကို ကြိုတင်ဝယ်ထားကြတာများပါတယ်။ ကျွန်တောတို့ထံတွင် ဖောက်သည်တော်တော်များများ ဟာ အထက်ပါလူငယ်များလို မျိုးရိုးလိုက်တဲ့ရောဂါများရှိပြီး အာမခံဝယ်ယူနိုင်ရန်(အခြား သာမှန်လူများထက် ဈေးပိုများသော အာမခံ) ယူလင့်ခ်မှ ကူညီပေးလိုက်တာများပါတယ်။ တချိန်ကြရင် ဆေးကုသစရိတ်ကုန်ကျမှာ ကြိုတင်မြင်ထားတဲ့အတွက် အခုကတည်းက ဝယ်ယူထားလိုက်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
၃. သင်ထင်ထားတာထက် ပိုပြီးဈေးသက်သာပါတယ်။
ဥပမာ တစ်နှစ်စာ အတွက်
အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီး အတွက် အထွေထွေ အာမခံဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂,၀၀၀ သာကျသင့်မှာဖြစ်ပြီး ( ကုိုယ်ဝန်မွေးဖွားရန်အပါအဝင် ဆိုပါက ဒေါ်လာ ၅,၂၀၀)
အသက် ၄၂ နှစ်အရွယ် လင်/မယား နှစ်ယောက် အပါအဝင် ကလေး မိသားစု အာမခံအတွက် အတွက် အထွေထွေ အာမခံဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂,၀၀၀ သာကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၅၅ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီး အတွက် အထွေထွေ အာမခံဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂,၀၀၀ သာကျသင့်မှာဖြစ်ပြီး (ပြင်ပလူနာ ပြသခြင်းအပါအဝင် ဆိုပါက ဒေါ်လာ ၈,၃၀၀)
ကျန်းမာရေးအာမခံ ဝယ်ယူရန် စိတ်ဝင်စားပါက အခမဲ့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ လက်ရှိအတွေ့အကြုံအများကြီးရှိတဲ့ အာမခံကုမ္ပဏီများ (Bupa, InterGlobal, Aviva, Tenet) နှင့် လက်တွဲလုပ်ဆောင်လျက်ရှိပြီး သင့်ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာသမျှ သက်သာနိုင်ရန် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
ယူလင့်(ခ်)မြန်မာသို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
If you need any assistance, simply ask!
သင့်ရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို ယူလင့်ခ်မှ ကူညီရန် အသင့်ပါ…။
စင်ကာပူက ဆေးကုသမှု စရိတ်တွေကြီးပေမယ့် စင်ကာပူမှာ ဆေးကုသဖို့ လာရောက်ြကတဲ့ မြန်မာအပါအဝင် နိုင်ငံခြားသားလူနာတွေလည်း များပြားလားပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ ကြ...
ကမ္ဘာတစ်ဝန်း အရက်ကြောင့် သေဆုံးသူ နှစ်စဉ်သုံးသန်းခန့်ရှိ
ရေလုံလောက်စွာ မသောက်ခြင်းကြောင့် ဦးနှောက်ကိုထိခိုက်နိုင်
အမျိုးသမီးများအတွက် မျိုးဥအေးခဲခြင်း – အပိုင်း (၃)
အမျိုးသမီးများအတွက်မျိုးဥအေးခဲခြင်း – အပိုင်း (၁)
လေဆာရောင်ခြည်ဖြင့် မျက်စိပါဝါဖျောက်ပေးနိုင်သော Lasik (Laser Assisted in Situ Keratomileusis) နည်းပညာအကြောင်း
နှလုံး​သွေး​ကြော​ထောက်​ကိရိယာ (bioresorbable stent)
၂ည ၃ရက် စင်ကာပူ Health & Fun ခရီးစဉ်
အခန်း-၁၆၀၉၊ ၁၆လွှာ၊ တိုက် - ၂အေ၊ တိုင်းမ်စီးတီး၊ ဟံသာဝတီလမ်း၊ ကမာရွတ်/စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
နောက်ဆုံးရ သတင်းအချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက Ulink Myanmar Facebook page ကို like လုပ်ထားရန်။